Nahoana no Niara-niròna tao Amin’ny Sisintany Amerikana Ireo Mpitady Fialokalofana Miisa 78, Na dia Mety Holavina Aza Ny Fangatahan’izy ireo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2017 4:33 GMT
Olona mandositra ny herisetra ao El Salvador, mipetraka ao ivelan'ny toerana Enclave Caracol ao Tijuana alohan'ny nanatonan'ny Valalamanjohin'ny Mpitsoa-ponenana ny sisintany Etazonia tamin'ny Alahady 7 Mey 2017. Sary: Erin Siegal McIntyre/PRI
Ity tantara avy amin'i Erin Siegal McIntyre ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 8 Mey 2017. Navoaka eto indray izany noho ny fiarahamiasa eo amin'ny PRI sy ny Global Voices.
Vao 3 volana monja ny zandriny indrindra tamin'izy ireo.
Nokarakarain'ny ekipa mpikatroka Amerikana sy Meksikana avy ao amin'ny vondrona Pueblo Sin Fronteras, nandao ny sisintany Meksikana atsimo ao an-tanànan'i Tapachula ny Viacrucis de Refugiados, na Valalamanjohin'ny Mpitsoa-ponenana tamin'ny 9 Aprily.
Vondrona lehilahy, vehivavy sy ankizy Amerikana Afovoany miisa 200 no niara-namakivaky an'i Meksika tamin'ny alalan'ny fiara fitateram-bahoaka, nandeha tongotra, fiara mba hihazo ny tampon'ny tambajotran'ny fiaran-dalamby mpitondra entana Meksikana fantatra amin'ny anarana hoe La Bestia (Ilay Biby).
Rehefa tonga tany Tijuana ny faran'ny herinandro voalohan'ny volana Mey, mpikambana 78 tao amin'ny vondrona no nanao diabe hihazo ny sisintany Amerikana tamin'ny Alahady 7 Mey.
Nandeha irery i Jimmy Antonio, 16 taona, avy ao El Progreso, Honduras. “Novonoin'ny andian-jiolahy ny rahalahiko,” hoy izy, manazava fa nidaroka azy sy nampanantena hamono azy ihany koa ireo andian-jiolahy.
Ny namany vaovao, Aron Mendez, 19 taona kosa nandositra an'i La Ceiba Atlantida, Honduras, noho ny antony mitovy amin'izany. Lasa mpinamana ireo tanora anankiroa taorian'ny fidirana tao amin'ny Karavana (Valalamanjohy) ao Tapachula.
“Na dia avy amin'ny firenena samihafa aza izahay, dia nifanohana sy niara-nandresy ireo zava-tsarotra, amin'ny maha vondrona iray,” hoy i Mendez.
Na dia nogadraina ao Etazonia aza ireo mpifindra monina rehetra miisa 78 avy ao amin'ny Karavanan'ny Mpitsoa-ponenana izay niditra tao amin'ny sisintany, manify ny fanantenan'izy ireo ho afaka hijanona.
Vondrona mpifindra monina Amerikana Afovoany 78 handeha ao El Chaparral, fidiran'ny mpandeha an-tongotra avy ao Meksika hihazo ny Vavahadin'ny Seranan-tsambo San Ysidro mba hangataka fialokalofana faobe. Sary:Erin Siegal McIntyre
Mampiseho ny antontanisa azon'ny Anjerimanontolo Transactional Record Access Clearinghouse (Trac) ao Syracus fa nolavina ny fangatahan'ny ankamaroan'ireo mpitady fialokalofana.
Tamin'ny hetran'ny taona 2016, ny tahan'ny fandavàna amin'ny ankapobeny dia 57 isanjato. Ho an'ny Amerikana Afovoany, mbola ambony izany. Manodidina ny 10 ka hatramin'ny 23 isanjato ihany no nahazo fialokalofana.
Midika izany fa tombanana ho valo, fara fahakeliny, amin'ireo mpitady fialokalofana 78 no mety ho afaka mijanona ao Etazonia..
Izany ihany koa no antony mahatonga ny mpitsoa-ponenana sasany, tahaka an'i Griselda, vehivavy nanova taovam-pananahana avy any Honduras, nanapa-kevitra hijanona ao Tijuana fa tsy hangataka fialokalofana.
“Matahotra loatra aho handeha ho any Etazonia,” hoy izy, manazava fa raiki-tahotra hiharan'ny fandroahana izy raha lavina ny fangatahany fialokalofana. Ho azy, toa mety hitranga tokoa ny mety ho famonoana azy rehefa miverina any Honduras izy.
Ara-potoana ny fahatongavan'ny Karavana tao amin'ny sisintany Amerikana. Nilaza ny Sekreteran'ny Fiarovana Amerikana, John Kelly vao haingana fa mino izy fa tsy azo atokisana ny “ankamaroan'ny olona” nanolotra fangatahana fialokalofana.
Zazalahy kely Amerikana Afovoany mipetraka miandry ny filaharan'ireo mpangataka fialokalofana izay nitodi-doha tao amin'ny sisintany Amerikana tamin'ny Alahady 7 Mey 2017. Sary: Erin Siegal McIntyre
Nanosika ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona ka nilaza fa maro amin'ireo mitady fanampiana ao amin'ny sisintany Amerikana no naverin-dalana no sady tsy nodinihana ny fangatahan'izy ireo.
Ny tatitra navoakan'ny fikambanana “Zon'olombelona no Voalohany” tamin'ny 3 Mey kosa dia nandrakitra tranga maningatsingana miisa 125 mikasika ireo mpitady fialokalofana voaraoka fa tsy mba nozahàna ny fangatahan'izy ireo. Tranga niseho tao amin'ny fidirana amin'ny seranan-tsambo fito manerana an'i Kalifornia, Texas ary Arizona..
Eo ambanin'ny lalàna Amerikana, takiana ireo mpiasan'ny fadintseranana sy ny Fiarovana ny Sisintany mba hanolotra ireo mpangataka fialokalofana any amin'ny manampahefana voaofana manokana ao amin'ny Sampan-draharahan'ny Olom-pirenena Amerikana sy ny Sampan-draharahan'ny Fifindrà-monina, izay manatontosa famotorana azo itokisana avy eo mba hamaritana raha mety hisy ny fahamendrehana amin'ny fangatahan'ny mpitsoa-ponenana fialokalofana.
Efa nilaza ny sampan-draharaha teo aloha fa manaraka ny fitsipika izy ireo.
Saingy tsy mitranga hatrany izany, hoy ilay mpampanoa lalàna Amerikana Nicole Ramos. “Nolazaina izy ireo fa: ‘Tsy mandray olona tahaka anareo izahay,’ na ‘Tsy misy intsony ny fialokalofana,'” hoy izy. “Amin'ny tsy fanarahana izany dingana izany, toa manery ny olona hiampita tsy ara-dalàna ny governemanta Amerikana.”